Itoobiya oo laga helay 11 qof oo cusub COVID19 – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Itoobiya oo laga helay 11 qof oo cusub COVID19
Itoobiya oo laga helay 11 qof oo cusub COVID19
itoobiya oo laga helay xanuunkii COVID19 Kow iyo toban (11) qof in ka badan ayaa laga helay cudurka ‘COVID19’ 24kii saac ee ugu dambeeyay 1764-kii tijaabooyin shaybaar oo la sameeyey, taas oo wadarta guud ee la xaqiijiyey ee Itoobiya ka dhigaysa 250.
Shan ka mid ah kuwan waxay ka yimaadeen #AddisAbeba, laba ka socda #Tigray xarunta karantiil gobolka; saddex ka mid ah xarunta karantiil ee gobolka #Afar iyo mid ka socota xarunta go’doominta ee #Adama. Shan ka mid ah bukaannadu waxay leeyihiin taariikhda safarka dibedda lixna waxay leeyihiin raad raac.
Dhanka kale, lix bukaan oo dheeri ah ayaa soo kabsaday 24-kii saacadood ee la soo dhaafay, taasoo ka dhigeysa wadarta bukaannada la soo celiyey tiradooda ay ahayd 105. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira 138 bukaan oo ku sugan xarunta go’doominta / daaweynta ee Isbitaalka Eka Kotebe. Ma jiraan bukaanno ku jira ICU ama xaalad degdeg ah.
Xirfadda ku ganacsiga jinka
Saynisyahano ku sugan Shiinaha ayaa rumeysan in dawadan cusub ay joojin...